Ity no tanora Yoda avy amin'ny andiany Star Wars: The High Republic | Famoronana an-tserasera
Este Young Yoda dia nipoitra avy amin'ny sary vaovao avy amin'ny Star Wars: The High Republic, andiany prequel izay mitondra antsika taonjato vitsivitsy talohan'ny zava-niseho tao The Phantom Menace.
Ary ny marina dia efa tia Yoda kely isika, ny Mamerina antsika amin'ny tompony Jedi tena lehibe ny tovolahy iray izay miseho mahatalanjona noho ity kanto hevitra vaovao ity izay tsy mamela olona tsy hiraharaha; indrindra ho an'ireo mpankafy an'izao rehetra izao noforonin'i George Lucas ary tsy manam-piafarana izany eo amin'ny tontolo manodidina azy sy ny toetrany, tantara ...
Ity tanora Yoda ity dia anisan'ireo fantatsika avy amin'ny sarimihetsika Lucasfilm ary ilay tovolahy kely niseho tamin'ny The Mandalorian ary nanjary iray amin'ireo andiana fahitalavitra kintana tamin'ny sehatra streaming Disney.
Mazava ho azy, ireo akanjo lava mifatotra amin'ny JediIzy ireo dia ampahany amin'ilay sary lalina sy manan-danja amin'ity Yoda vaovao ity izay mitondra fifaliana ho antsika amin'ity taona mahatsiravina ity izay hijanona ao amin'ny tantaran'ny tantarantsika olombelona.
Tokony holazaina fa tsy ho ity Yoda ity izany toetra mamirapiratra sy manaitra avy amin'ny Return of the JediFa kosa, isika dia eo alohan'ny mpampianatra iray izay ho hita eo amin'ny fiarahan'ny Padawans hafa tokony hampianariny. Ny tena marina dia ny fahitana azy tamin'io taona io nahazatra ny sarimihetsika sy ny fahitalavitra, dia manokatra ny fahaliananay momba ny tantarany sy ny fomba hahitantsika azy ireo amin'ny efijery lehibe ary io streaming io bebe kokoa.
Manentana anao izahay hiverina hahita zaza yoda ohatrinona ny fitiavana azony ary ahoana no tsy, saron-tava Disney sasany ka farafaharatsiny mba manana ny antsika endri-tsoratra ankafizinay miaraka amintsika isan'andro amin'ny 20xx ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Raha tianao i Yoda kely dia miomàna ho an'ireo tanora